समाज - Bichar Batika
प्रधानमन्त्री ओलीलाई विरोध प्रदर्शन कस्तो हुन्छ हेर्न प्रचण्डको आग्रह
माघ २८, काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले आयोजना गरेको जनसभामा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले विरोध प्रदर्शन कस्तो हुन्छ हेर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका छन् । माघ ९ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा प्रचण्ड–माधव समूहले गरेको सभामा ओलीले सभा भनेको कस्तो हुन्छ, मा...
सुमन शर्मा सनराइज बैंकको सीईओमा नियुक्त
माघ २८, काठमाडौं । सनराइज बैंकले बुधबार बसेको बैंक सञ्चालक समिति बैठकमा बैंकर शंकर शर्मालाई चार वर्षका लागि सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यस अघि शर्मा माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका थिए । लगानी बोर्ड र नेपाल इन्फ्रास्ट्र बैंकको सीईओमा पनि उनको नाम चर्चामा...
प्रचण्ड–माधव समूहको प्रदर्शन सुरु नहुँदै सडकमा जाम, चक्रपथभित्र ठूला गाडीलाई प्रवेशमा रोक
माघ २८, काठमाडौं । प्रचण्ड–माधव समूहले काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शनसहित विरोध सभा गर्ने भएपछि उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन निकै प्रभावित भएको छ । चक्रपथभित्र ठूला गाडीहरुलाई प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ । ठूला गाडीहरुलाई चक्रपथ वरिपरि नै रोकेर राखिएको छ । कालीमाटी, थापाथली, लैनचौ...
ह्वाट्सएपलाई पछाडि पार्दै टेलिग्राम बन्यो सबैभन्दा धेरै डाउनलोड हुने एप
टिकटक तथा फेसबुक मातहतको इन्स्टेन्ट मेसेजि एप ह्वाट्सएप लगायतलाई पछाडि पार्दै क्लाउड बेस्ड मेसेजि एप टेलिग्राम विश्वमा सबैभन्दा धेरै डाउनलोड हुने एप बनेको छ । नन गेमिङ एपतर्फ टेलिग्राम चालु वर्ष सन् २०२१ को जनवरी महिनामा पहिलो नम्बरमा उक्लिएको हो । जनवरी महिनामा टेलिग्राम एप विश्...
नयाँ चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनेको संख्या ५ लाख नाघ्यो
माघ २६, काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण झण्डै १० महिनासम्म बन्द भएको चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अहिले खुलेकाले आवेदन दिनेको संख्या पाँच लाख नाघेको छ । देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालय मार्फत परीक्षामा सहभागी हुनका लागि सेवाग्राहीले फारम भरिरहेका छन् । विभागका सूचना अधिका...
फेवातालको बाँध मर्मत हुँदै
माघ २५, कास्की । फेवातालको ड्यामसाइड बाँध जीर्ण भएको कारण ४२ वर्षपछि जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले मर्मतसम्भार गर्न लागेको हो । विसं २०१८ मा बाँधिएको ताल फुटेपछि पुनः २०३५ सालमा नयाँ बाँध बाँधिएको थियो । शुरुको ४६ फिट अग्लो बाँध भारतीय सहयोग मिसनले र पछि संयुक्त र...
काठमाडौंमा मार्सी चामल किन्ने उपभोक्ताको लर्को
माघ २५, काठमाडौं । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा मार्सी चामल किन्नेको लर्को बढेको छ । खाद्यले नेपाल फूडमार्फत बिक्री सुरु गरेको ८ दिनमा ९ सय ५१ किलो चामल बिक्री भइसकेको कम्पनीकी सूचना अधिकारी सर्मिला न्यौपाने सुवेदीले जानकारी दिइन् । काठमाडौंमा परीक्षणको रुपमा ब...
कोरोना विरुद्ध पहिलो चरणको खोप लगाउने कार्यक्रम सम्पन्न, अब पत्रकार र कूटनीतिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई खोप दिइने
माघ २५, काठमाडौं । नोवेल कोरोना भाइरस कोभिड –१९ विरुद्ध पहिलो चरणको खोप लगाउने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । एक लाख ८४ हजारले सफलतापूर्वक खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । अब दोस्रो चरणमा पत्रकार र कूटनीतिक क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई खोप दिइने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जाग...
काठमाडौंमा नेकपा ओली समूहको र्‍याली
माघ २३, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केपी शर्मा ओली समूहले विभिन्न ठाउँबाट र्‍याली सुरु गरेको छ । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयबाहिर शुक्रबार सभा आयोजना गरेको ओली समूहका नेता कार्यकर्ताले काठमाडौंका विभिन्न ठाउँबाट जुलुससहित प्रदर्शन गरेका छन् । र्‍याली उपत्य...
सरकारको सनमर्थनमा विभिन्न जिल्लाबाट उत्रिए जनता
माघ २३, काठमाडौं । सरकारको सनमर्थनमा विभिन्न जिल्लाबाट प्रदर्शन र आमसभाको लागि जनताहरुको ओइरो लागेको छ । हिजो प्रचण्ड–माधव पक्षले बन्द हड्ताल गरे पनि आजको प्रदर्शनलाई खासै असर नपरेको देखिन्छ । ओली पक्ष जनताले रामेछाप, दोलखा, काभे्रका जनताहरु बिहानै प्रदर्शन...
आज नारायणहिटीमा ओली समूहले शक्ति प्रदर्शन र आमसभा गर्दै
माघ २३, काठमाडौं । आज सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केपी शर्मा ओली समूहले शक्ति प्रदर्शनसहित नारायणहिटी अगाडी आमसभा गर्न लागेको छ । ओली समूहले शक्ति प्रदर्शनका लागि विभिन्न जिल्लाबाट कार्यकर्ता काठमाडौंमा उतार्दै छ । ओली समूहका नेताले आजको सभामा ३ लाख कार्यकर...
उपत्यकामा आमहड्तालको आंशिक प्रभाव
माघ २२, काठमाडौं । उपत्यकामा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले गरेको आमहड्तालको आंशिक प्रभाव परेको छ । प्रचण्ड–माधव समूहका नेता, कार्यकर्ता उपत्यकाका मुख्य सडकमा देखिएका छन् भने भित्री सडकमा सवारीसाधनहरु चलेका छन् । शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गरिएका छन् । पसलहरु पनि कुनै–कुनै...
आजदेखि ट्राफिक नियम उल्लंघनको जरिमाना अनलाइन मार्फत
माघ २१, काठमाडौं । सवारी चालकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे अनलाइनबाटै जरिमाना भुक्तान गर्न मिल्ने प्रणाली आजबाट सुरु गरिएको महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले जनाएको छ । सवारी चालकहरुले बैंकमा लाइन बस्दा धेरै समय व्यर्थमा गएको कारणले अब त्यस्तो समस्याको हल हुने महाशाखाको विश्वास छ । ...
संकटमा परेका विपन्न परिवारलाई जागरुक समाज ‘जोश’को सहयोग
माघ २०, रामेछाप । रामेछाप नगरपालिका वडा नं. ५ रामपुर निवासी टिकाराम सुनुवार तथा पातली सुनुवारको ७ वर्षे छोरी २०७७ माघ १३ गते आफ्नै घरमा आगोले जलेर सशक्त घाइते भएकोले वडा कार्यलय र स्थानियहरुको सहयोगले जिल्ला अस्पताल रामेछापमा पुर्याएता पनि रामेछापमा उपचार हुन नसकेपछि जिल्ला अस्पताल र व...
नेकपा रामेछाप खाँडादेवी गाउँपालिका–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको वृहत कार्यकर्ता भेला सम्पन्न
माघ १९, रामेछाप । खाँडादेवी गाउँपालिका–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको वृहत कार्यकर्ता भेलामा नेकपा केन्द्रिय सदस्य पूर्व मन्त्री कमल प्रसाद चौलागाईंको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको भेलाले युवा नेता भुवन श्रेष्ठ अध्यक्ष, उपाध्यक्षमा उदय बहादुर कार्की, सचिव राम हरि कार्की, सहसचिव मनबि...
रामेछाप नगर–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको नेतृत्वमा श्रेष्ठ मनोनित
माघ १८, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा रामेछाप नगर–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चको अध्यक्षमा सर्वसहम्मत दिलिप श्रेष्ठ मनोनित हुनुभएको छ । माघ १७ गते शनिबार बाग्मती प्रदेशको सम्पर्क कार्यलय बागबजारमा पूर्व नेकपा एमाले रामेछाप नगर–काठमाडौं सम्पर्क मञ्...
चुनावपछि प्रचण्ड–माधव समुहलाई देशैभर बत्ति बालेर खोज्नुपर्छः सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ
माघ १८, काठमाडौं । नेकपा दोलखा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले काठमाडौंमा आयोजना गरेको बृहत कार्यकर्ता भेलामा सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले नेकपाबाट अलगिएर गएका प्रचण्ड र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपालाई चुनावपछि बत्ति बालेर खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । &l...
कञ्चनपुरमा नक्कली नेपाली नोटसहित २ जना पक्राउ
माघ १८, कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका– ८ पचुँइबाट नक्कली नेपाली नोटसहित दुई जनालाई सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नक्कली नोट बनाउने सामग्री र नक्कली नोटसहित लालझाडी गाउँपालिका–१ का २३ वर्षीय सञ्जय राना र सोही ठाउँ बस्ने २२ वर्षीय इन्द्रसिंह रानाल...
“पिरीरी सालको पात बजाउनेले” सार्वजनिक
माघ १३, काठमाडौं । गायक सुबर्ण बुढाथोकी र गायीका रोश्नी पुन मगरको स्वरमा रहेको गीत “पिरीरी सालको पात बजाउनेले” सार्वजनिक भएको छ । सङ्गीतकार भद्र नकलले गीत “पिरीरी सालको पात बजाउनेले” आफैं शब्द रचना गरेका हुन् । खमेस श्रेष्ठले निर्देशन गरेको एल्...
बीबीसीको प्रभावशाली महिलाको सुचिमा परिन् १८ वर्षीया सपना रोका
९ मंसिर, काठमाडौं । बेवारिसे शव व्यवस्थापन गर्दै आएकी म्याग्दीकी १८ वर्षीया सपना रोका मगर ब्रिटिश ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन (बीबीसी)को प्रभावशाली महिलाको सूचिमा परेकी छन् । बीबीसीले मंगलबार सन् २०२० को १०० प्रभावशाली महिलाको सूचि सार्वजनिक गरेको हो । यो सूचिमा फिनल्याण्डकी प्रधानमन्त्री, अक्सफोर्ड व...